I-Chrome iyakusivumela ukuba sithulise ukuveliswa okuzenzekelayo kweevidiyo | Iindaba zeGajethi
Ukuba sisebenzisa ikhompyuter xa sikhangela kwi-intanethi, kunokwenzeka ukuba kuyo yonke imini uya kuphelela kwinani elikhulu leetab evuliweyo, ezinye zazo ziya kusinika olo lonwabo lokudlala ngokuzenzekelayo iividiyo, zisibetha kuninzi ngamanye amaxesha uloyiko olukhulu, ngakumbi ukuba umthamo wekhompyuter yethu uphezulu kunesiqhelo, kuba simamele ingoma yethu esiyithandayo, umzekelo. Xa sikhangela, sifumana ipesenti ephezulu kakhulu yamathuba okuba ekugqibeleni siphele kwiwebhusayithi edlala ividiyo ngokuzenzekelayo, nokuba kukwintengiso okanye kwiwebhusayithi uqobo, kodwa enkosi kwiChannel, siya kuba nakho ukuyibhala le ngxaki.
Uhlaziyo olulandelayo lwe-Chrome luya kusivumela ukuba sisete leliphi iphepha lewebhu elinokudlala ngokuzenzekelayo isandi, kwaye ke ividiyo, ngale ndlela, ngale ndlela siya kuyiphepha, kungekuphela nje ukuba iphepha lewebhu lilayisha ngendlela ekhawulezayo, kodwa nokuba siyeke ukubetha ukutsiba ngalo lonke ixesha umxholo udlalwa ngaphandle kokuwugunyazisa ngaphambili, yimeko yevidiyo kwiYouTube.
Ukuze sikwazi ukufumanisa ukuba zeziphi iiwebhusayithi ezigunyazisiweyo, kufuneka ucofe u-iidilesi bar cone nakwimenyu ebonakalayo, cofa kwisandi ukukhetha ukuba sifuna ukuba umxholo udlalwe ngokuzenzekelayo okanye ukuba sifuna ukuvimba yonke into eyenzelwe ukuba idlalwe ngokuzenzekelayo. Kodwa i-Chrome ayisiyiyo kuphela isikhangeli esisinika lo msebenzi, kuba isiphequluli seSafari, ebandakanyiwe ukufakwa ngokwendalo kwiMacOS High Sierra, ikwasinika olu khetho, ukhetho olusivumela ukuba siqwalasele ukuba leliphi iphepha lewebhu elinokudlala ividiyo kunye nesandi ngokuzenzekelayo kwaye zeziphi ezingenayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » I-Chrome iyakusivumela ukuba sithule ukudlala ngokuzenzekelayo kweevidiyo